ကမ်ဘာကြျော ပနျးခြီ ဆရာကွီး ပီကာဆို ရဲ့ အခြိနျ ၁၀ စက်ကနျ့ သာ ဆှဲရတဲ့ မီလီယံ ဒျေါလာတနျ ပနျးခြီကားတဈခပျြ – Nyi Ma Lay
ကမ်ဘာကြျော ပနျးခြီ ဆရာကွီး ပီကာဆို ရဲ့ အခြိနျ ၁၀ စက်ကနျ့ သာ ဆှဲရတဲ့ မီလီယံ ဒျေါလာတနျ ပနျးခြီကားတဈခပျြ
By Nyi Ma LayPosted on September 30, 2021 September 30, 2021
တဈနေ့ မှာ ပနျးခြီ ဆရာကွီး ပီကာဆို တဈေ ယာကျ လမျးေ လြာကျနရေငျး ပီကာဆို မှနျး သတိပွုမိတဲ့ အမြိုးသမီး တဈယော ကျက အပွေး အလှား လာနူတျဆကျတယျ။ ကမြဟာ ဆရာကွီး ရဲ့ ပရိတျ သတျ တဈယောကျပါ။
ဆရာကွီး ရဲ့ ပနျးခြီတှကေို အရမျးနှဈသကျပါ တယျ။ ကမြ အတှကျ အမှတျတရ ပနျးခြီကား လေး တဈခပျြ ဆှဲပေးပါလားလို့ တောငျးပနျလို ကျတယျ။ ပီကာဆို က တဈခကျြပွုံးလိုကျပွီး ငါမှာ ပနျးခြီး ဆှဲဖို့ ဘာမှ ပါမလာဘူး။ နောကျတဈနေ့ အခှငျ့ သငျ့မှ ဆှဲပေးမယျလို့ ပွနျပွောလိုကျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဟို အမြိုးသမီးက အနားက မခှာပဲ အခုပဲ အဆငျပွောတာနဲ့ ဆှဲပေးပါ နောကျတဈကွိ မျကွုံဖို့ဆိုတာ ဘယျေ တာ့မှနျး မသခြောလို့ပါ ဆိုပွီး အတငျးပကေပျနတေယျတဲ့..။
အဲဒါနဲ့ ပီကာဆို လညျး မနသောပဲ သူ့ အိပျကပျ ထဲက စာရှကျပိုငျး လေးထဲမှာ ပုံတဈပုံ ဆှဲပေးလိုကျတယျ။ သူဆှဲလိုကျတာ ၁၀ စက်ကနျ့ လောကျပဲ ကွာတယျ။ ပွီးတော့ ပီကာဆို က ဒီပုံကို ယူသှား ဒီပုံဟာ မီလီယံ ဒျေါလာ နဲ့ ခြီပွီး တနျတယျလို့ ပွောလိုကျတယျ။
အမြိုးသမီး လညျး အံသွပွီး မယုံနိုငျေ အာငျ ဖွဈနတောပေါ့..။ ၁၀ စက်ကနျ့ေ လာကျနဲ့ ဆှဲလိုကျတဲ့ ပနျးခြီက ဒျေါလာ မီလီယံ နဲ့ ခြီပွီး တနျတယျဖွဈနိုငျပါ့ မလားပေါ့။အဲဒါ အိမျရောကျေ တာ့လညျး ပီကာဆို က သူ့ကို နောကျ လိုကျတယျပဲ ထငျနတေယျ။ နောကျတော့ မထူးပါဘူးဆိုပွီး အဲဒီပနျးခြီးလေး ကိုငျပွီး ပနျးခြီ ပွခနျး တှမှော လိုကျမေးတယျ။
သူမ မယုံကွညျ့နိုငျလောကျ သိလိုကျရတာက အဲဒီ ၁၀ စက်ကနျ့ နဲ့ ဆှဲလိုကျတဲ့ ပနျးခြီ လေးဟာ ဒျေါလာ မီလီယံ နဲ့ ခြီပွီး တနျနတေယျတဲ့။အဲဒါနဲ့ သူမဟာ နောကျတဈကွိမျ ပီကာဆို ကို မတှတှေ့အေ့ောငျရှာပွီး တှတေ့ာနဲ့ ဆရာကွီး ရှငျ ဆရာကွီး ပွောလိုကျတဲ့ အတိုငျးပါပဲ.. ဆရာကွီးရဲ့ ပနျးခြီ အပိုငျးအစ လေးဟာ ဒျေါလာ မီလီယံ နဲ့ ခြီပွီး တနျနတေယျ။ ပွီးတော့ သူမက ဆကျပွီး ကမြ ဆရာကွီးရဲ့ တပွညျ့ဖွဈပါရစေ… ကမြကို ဆရာကွီး လို ဖွဈအောငျ အခြိနျတိုတိုအတှငျးမှာ တတျအောငျသငျကွားပေးပါ ဆိုပွီး တောငျးဆိုလိုကျတယျ။
ပီကာဆို က ခပျသာသာပွုံးလိုကျပွီး သမီးငယျ ရေ ဒါမြိုး ၁၀ စက်ကနျ့ နဲ့ ဒျေါလာ မီလီယံ နဲ့ ခြီပွီး တနျတဲ့ ပနျးခြီ ဆှဲတတျဖို့ ငါ့ ဘဝ တဈခုလုံးရငျးခဲ့ရတယျ။ အခကျအခဲတှေ ပငျပနျးဆငျးရဲမှုတှေ စိတျပကျြမှုပေါငျး မြားစှာ ခံပွီးမှ ဒါမြိုးဆှဲ တတျလာတာပါ..။ မငျးရဲ့ ဘဝ တဈခုလုံးရငျးပွီး ဒီလို အခကျအခဲတှေ ပငျပနျးဆငျးရဲမှုတှေ စိတျပကျြမှုတှေ ခါးဆီး ခံနိုငျမယျဆိုရငျတော့ ငါကလညျး သငျပေးဖို့ အသငျ့ပါလို့ ပွနျပွောလိုကျတယျ။ ပီကာဆို က ၁၀ စက်ကနျ့ နဲ့ ဒျေါလာ မီလီယံ နဲ့ ခြီပွီး တနျတဲ့ ပနျးခြီကား ဆှဲခဲ့တာ အရမျးလှယျမယျ ထငျခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးဟာ ပါးစပျ အဟောငျးသား ဖွဈနတောပေါ့..။
လူတျောေ တျာမြားမြားဟာ တခွားသူ တဈယောကျ အောငျမွငျ ကွီးပှားေ နတာတှရေ့ငျ သူတို့လို့ပဲ အောငျမွငျ ကွီးပှား ခငျြကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီ့ အောငျမွငျကွီးပှားသူတှေ ဘယျလို အခကျအခဲတှေ ပငျပနျးဆ ငျးရဲမှုတှေ ရငျဆိုငျခဲ့ရ လညျးဆိုတာ သိပျစိတျမဝ ငျစားကွဘူး။ ပီကာဆို ရဲ့ ဘဝ ကို လလေ့ာကွညျ့ရငျ သူဟာ အသကျ ၉၁ နှဈမှာ ကှယျလှနျခဲ့တယျ။
သူဟာ ပနျးခြီကားနဲ့ အနုပညာလကျရာပေါငျး ၂ သောငျး ၆ ထောငျ ကြျော (၂၆၀၇၅ ခု ) ဆှဲခဲ့တယျလို့ မှတျတမျးတှကေ ဆိုတယျ။ သူဟာ အသကျ ၂၀ အရှယျမှာ တနျးဝငျ ပနျးခြီ ဆရာ တဈယောကျ ဖွဈတယျ ဆိုပါဆို့ အသကျ ၂၀ အရှယျက နေ အသကျ ၉၁ နှဈအရှယျထိ နှဈပေါငျး ၇၁ နှဈအတှငျး ရကျပေါငျး ၂၅၉၁၅ ရကျနသှေားတယျ။
သူဆှဲခဲ့တဲ့ ပနျးခြီပေါငျးက ၂ သောငျး ၆ ထောငျကြျောဆိုတော့ တဈရကျကို တနျးဝငျ ပနျးခြီကား အသဈ တဈခုမက ဆှဲခဲ့တယျလို့ ယဘေုယြ တှကျကွညျ့လို့ရတယျ။စဉျးစား ကွညျ့ရငျ အံသွစရာ သူရဲ့ လုပျအားနှုနျးကိုတှရေ့တယျ။
အခုခတျေ ပနျးခြီ ဆရာေ တှဟာ သူ့ရဲ့ ကြျောကွားမှုနဲ့ သူ့လကျရာတှေ မှီဖို့ကို မဆိုထားနဲ့ သူ့လို တဈနေ့ ပနျးခြီးကား တဈခုပွီးအောငျ ဆှဲနိုငျမလား ဆိုတာ မေးစရာ မေးခှနျးရှိတယျ။ ဒီစာကို Stephen King ရဲ့ အဆိုအမိနျ့လေးနဲ့ အဆုံးသတျခငျြပါတယျ။
“Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the successful one isalot of hard work. ”“Stephen King”“….
ပါရမီ ဆိုတာ စားပှဲပျေါက ဆားထကျ ပေါပါသေးတယျ။ ပါရမီရှငျ နဲ့ အောငျမွငျသူ ကို အလုပျကွိုးစား မှုတှကေသာ ပိုငျးခွားသှားတာပါတဲ့..” စတီဗငျ ကငျး။
ဆိုလိုခငျြတာက ကနြျောတို့တှေ အရပျထဲမှာ ပွောကွတယျ။ သူက သီခငျြး ဆိုအရမျး ကောငျးတယျ။ သီခငျြး ဆိုတာ ပါရမီရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီတဈယောကျဟာ အောငျမွငျတဲ့ အဆိုတျော တဈယောကျ ဖွဈ ခငျြမှ ဖွဈလာတာပါ..။ ဆကျပွီး အဆိုတျော တဈယောကျဖွဈအောငျ ကွိုးစား အားထုတျမှသာ အဆိုတျော တဈယောကျ ဖွဈလာမှာပါ။ပီကာဆို ဟာ ၁၀ စက်ကနျ့ သာဆှဲရတဲ့ မီလီယံ ဒျေါလာတနျ ပနျးခြီကား ရဖို့ သူ့ဘဝ တဈခုလုံး နှဈပွီး ကွိုးစားခဲ့ရတာ။
ကမ်ဘာကြျော ပနျးခြီ ဆရာကွီး ဖွဈဖို့ အခကျအခဲတှေ ပငျပနျးဆငျးရဲမှုတှေ စိတျပကျြမှုပေါငျး မြားစှာခံပွီး ကွိုးစားခဲ့ရတာ။ ဒါကွောငျ့ ဘဝမှ ဘယျလို အခကျအခဲတှကွေုံကွုံ စိတျပကျြ ဝမျးနညျးမှုတှေ ကွုံကွုံ ပီကာဆို ရဲ့ အလုပျကွိုးစားမှု အွေ ကာငျးလေးကို သတိရပွီး အားတငျးပါ။ ကိုယျလကျရှိလုပျေ နတာထကျ နှဈဆတိုးပွီး ကွိုးစားကွညျ့ လိုကျပါအုံး.. ဒါဆိုရငျ ကိုယျဟာ…ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ ပနျးတိုငျနဲ့ တဖွေးဖွေး နီးလာနပွေီဆိုတာ ကွိမျးသေေ နပွီပေါ့…။ Value of Painting or Hard work ကို ဆီလြှျောအောငျ ပွနျဆိုပါသညျ။ Credit;
တစ်နေ့ မှာ ပန်းချီ ဆရာကြီး ပီကာဆို တစ်ေ ယာက် လမ်းေ လျာက်နေရင်း ပီကာဆို မှန်း သတိပြုမိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယော က်က အပြေး အလွှား လာနူတ်ဆက်တယ်။ ကျမဟာ ဆရာကြီး ရဲ့ ပရိတ် သတ် တစ်ယောက်ပါ။
ဆရာကြီး ရဲ့ ပန်းချီတွေကို အရမ်းနှစ်သက်ပါ တယ်။ ကျမ အတွက် အမှတ်တရ ပန်းချီကား လေး တစ်ချပ် ဆွဲပေးပါလားလို့ တောင်းပန်လို က်တယ်။ ပီကာဆို က တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး ငါမှာ ပန်းချီး ဆွဲဖို့ ဘာမှ ပါမလာဘူး။ နောက်တစ်နေ့ အခွင့် သင့်မှ ဆွဲပေးမယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟို အမျိုးသမီးက အနားက မခွာပဲ အခုပဲ အဆင်ပြောတာနဲ့ ဆွဲပေးပါ နောက်တစ်ကြိ မ်ကြုံဖို့ဆိုတာ ဘယ်ေ တာ့မှန်း မသေချာလို့ပါ ဆိုပြီး အတင်းပေကပ်နေတယ်တဲ့..။
အဲဒါနဲ့ ပီကာဆို လည်း မနေသာပဲ သူ့ အိပ်ကပ် ထဲက စာရွက်ပိုင်း လေးထဲမှာ ပုံတစ်ပုံ ဆွဲပေးလိုက်တယ်။ သူဆွဲလိုက်တာ ၁၀ စက္ကန့် လောက်ပဲ ကြာတယ်။ ပြီးတော့ ပီကာဆို က ဒီပုံကို ယူသွား ဒီပုံဟာ မီလီယံ ဒေါ်လာ နဲ့ ချီပြီး တန်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။
အမျိုးသမီး လည်း အံသြပြီး မယုံနိုင်ေ အာင် ဖြစ်နေတာပေါ့..။ ၁၀ စက္ကန့်ေ လာက်နဲ့ ဆွဲလိုက်တဲ့ ပန်းချီက ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့ မလားပေါ့။အဲဒါ အိမ်ရောက်ေ တာ့လည်း ပီကာဆို က သူ့ကို နောက် လိုက်တယ်ပဲ ထင်နေတယ်။ နောက်တော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး အဲဒီပန်းချီးလေး ကိုင်ပြီး ပန်းချီ ပြခန်း တွေမှာ လိုက်မေးတယ်။
သူမ မယုံကြည့်နိုင်လောက် သိလိုက်ရတာက အဲဒီ ၁၀ စက္ကန့် နဲ့ ဆွဲလိုက်တဲ့ ပန်းချီ လေးဟာ ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်နေတယ်တဲ့။အဲဒါနဲ့ သူမဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ပီကာဆို ကို မတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီး တွေ့တာနဲ့ ဆရာကြီး ရှင် ဆရာကြီး ပြောလိုက်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ.. ဆရာကြီးရဲ့ ပန်းချီ အပိုင်းအစ လေးဟာ ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူမက ဆက်ပြီး ကျမ ဆရာကြီးရဲ့ တပြည့်ဖြစ်ပါရစေ… ကျမကို ဆရာကြီး လို ဖြစ်အောင် အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ တတ်အောင်သင်ကြားပေးပါ ဆိုပြီး တောင်းဆိုလိုက်တယ်။
ပီကာဆို က ခပ်သာသာပြုံးလိုက်ပြီး သမီးငယ် ရေ ဒါမျိုး ၁၀ စက္ကန့် နဲ့ ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်တဲ့ ပန်းချီ ဆွဲတတ်ဖို့ ငါ့ ဘဝ တစ်ခုလုံးရင်းခဲ့ရတယ်။ အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ စိတ်ပျက်မှုပေါင်း များစွာ ခံပြီးမှ ဒါမျိုးဆွဲ တတ်လာတာပါ..။ မင်းရဲ့ ဘဝ တစ်ခုလုံးရင်းပြီး ဒီလို အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ စိတ်ပျက်မှုတွေ ခါးဆီး ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ငါကလည်း သင်ပေးဖို့ အသင့်ပါလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ပီကာဆို က ၁၀ စက္ကန့် နဲ့ ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်တဲ့ ပန်းချီကား ဆွဲခဲ့တာ အရမ်းလွယ်မယ် ထင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်နေတာပေါ့..။
လူတော်ေ တ်ာများများဟာ တခြားသူ တစ်ယောက် အောင်မြင် ကြီးပွားေ နတာတွေ့ရင် သူတို့လို့ပဲ အောင်မြင် ကြီးပွား ချင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့ အောင်မြင်ကြီးပွားသူတွေ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းဆ င်းရဲမှုတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ လည်းဆိုတာ သိပ်စိတ်မဝ င်စားကြဘူး။ ပီကာဆို ရဲ့ ဘဝ ကို လေ့လာကြည့်ရင် သူဟာ အသက် ၉၁ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။
သူဟာ ပန်းချီကားနဲ့ အနုပညာလက်ရာပေါင်း ၂ သောင်း ၆ ထောင် ကျော် (၂၆၀၇၅ ခု ) ဆွဲခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေက ဆိုတယ်။ သူဟာ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ တန်းဝင် ပန်းချီ ဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် ဆိုပါဆို့ အသက် ၂၀ အရွယ်က နေ အသက် ၉၁ နှစ်အရွယ်ထိ နှစ်ပေါင်း ၇၁ နှစ်အတွင်း ရက်ပေါင်း ၂၅၉၁၅ ရက်နေသွားတယ်။
သူဆွဲခဲ့တဲ့ ပန်းချီပေါင်းက ၂ သောင်း ၆ ထောင်ကျော်ဆိုတော့ တစ်ရက်ကို တန်းဝင် ပန်းချီကား အသစ် တစ်ခုမက ဆွဲခဲ့တယ်လို့ ယေဘုယျ တွက်ကြည့်လို့ရတယ်။စဉ်းစား ကြည့်ရင် အံသြစရာ သူရဲ့ လုပ်အားနှုန်းကိုတွေ့ရတယ်။
အခုခေတ် ပန်းချီ ဆရာေ တွဟာ သူ့ရဲ့ ကျော်ကြားမှုနဲ့ သူ့လက်ရာတွေ မှီဖို့ကို မဆိုထားနဲ့ သူ့လို တစ်နေ့ ပန်းချီးကား တစ်ခုပြီးအောင် ဆွဲနိုင်မလား ဆိုတာ မေးစရာ မေးခွန်းရှိတယ်။ ဒီစာကို Stephen King ရဲ့ အဆိုအမိန့်လေးနဲ့ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။
ပါရမီ ဆိုတာ စားပွဲပေါ်က ဆားထက် ပေါပါသေးတယ်။ ပါရမီရှင် နဲ့ အောင်မြင်သူ ကို အလုပ်ကြိုးစား မှုတွေကသာ ပိုင်းခြားသွားတာပါတဲ့..” စတီဗင် ကင်း။
ဆိုလိုချင်တာက ကျနော်တို့တွေ အရပ်ထဲမှာ ပြောကြတယ်။ သူက သီချင်း ဆိုအရမ်း ကောင်းတယ်။ သီချင်း ဆိုတာ ပါရမီရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတစ်ယောက်ဟာ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ် ချင်မှ ဖြစ်လာတာပါ..။ ဆက်ပြီး အဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစား အားထုတ်မှသာ အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။ပီကာဆို ဟာ ၁၀ စက္ကန့် သာဆွဲရတဲ့ မီလီယံ ဒေါ်လာတန် ပန်းချီကား ရဖို့ သူ့ဘဝ တစ်ခုလုံး နှစ်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတာ။
ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီ ဆရာကြီး ဖြစ်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ စိတ်ပျက်မှုပေါင်း များစွာခံပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတာ။ ဒါကြောင့် ဘဝမှ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေကြုံကြုံ စိတ်ပျက် ဝမ်းနည်းမှုတွေ ကြုံကြုံ ပီကာဆို ရဲ့ အလုပ်ကြိုးစားမှု အြေ ကာင်းလေးကို သတိရပြီး အားတင်းပါ။ ကိုယ်လက်ရှိလုပ်ေ နတာထက် နှစ်ဆတိုးပြီး ကြိုးစားကြည့် လိုက်ပါအုံး.. ဒါဆိုရင် ကိုယ်ဟာ…ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်နဲ့ တဖြေးဖြေး နီးလာနေပြီဆိုတာ ကြိမ်းသေေ နပြီပေါ့…။ Value of Painting or Hard work ကို ဆီလျှော်အောင် ပြန်ဆိုပါသည်။ Credit;
Previous post စှရမျးခမျြးသာတဲ့ သူဌေးမြားသာ သောကျသုံးနိုငျမယျ့ ဒျေါလာ ၁၄၀၀၀ တနျဖိုး ရှိတဲ့ လကျဘကျရညျ
Next post အရှယျရောကျပီးသား ယောကျြားတှေ ရဲ့ စကားပွောသံကို လုံးဝ မကွားရတော့တဲ့ အမြိုးသမီး